डिप्रोक्स लघुवित्त : कम्पनी विश्लेषण (बिहीवार, ९ असोज २०७६)
डिप्रोक्स लघुवित्त मर्जर तथा प्राप्तिको सम्बन्धमा गृहकार्य अघि बढाएको छ । कम्पनीले मर्जर तथा प्राप्ति प्रयोजनका लागि आवश्यक छलफल तथा गृहकार्य गर्न समिति समेत गठन गरिसकेको छ । साउन १६ गते बसेको सञ्चालन समितिको बैठकले अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू गाभ्ने वा प्राप्ति गर्ने प्रयोजनका लागि समिति गठन गरेको हो ।
राष्ट्रिय स्तरको यस वित्तीय संस्थाले हाल देशका ७१ जिल्लाहरूमा ११९ शाखा कार्यालयमार्पmत २ लाखभन्दा बढी ग्रामीण तथा विपन्न वर्गका घरपरिवारलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । गतवर्ष यस कम्पनीले रू. ४३ करोड २ लाख ६ हजार खुद नाफा गरेको छ । सो अवधिसम्म कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. ७७ करोड ३४ लाख १० हजार कायम भएको छ । जगेडा कोषमा रू. ७८ करोड २८ लाख १९ हजार छ । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ५५ दशमलव ६२ रहेको छ । बुधवारको कारोबारमा कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य १ अंक घटेर रू. ७१५ कायम भएको छ ।
2019-09-26 - 213 view(s) - abhiyandaily